“Fardaha Ka Degimayne Geela Duub.”!! W/Q Muniir Axmed Cigaal
Shirkii Xisbiga Kulmiye ee Hargaysa lagu soo gebo gabeeyay wuxuu u muuqday amma uu aha madal aroos, marki xeerkii Xisbiga u yaalay iyo kii dimuquraadiga ahaaba layska laabay. Waxaynu haddaba ku mataalayna hanaankii shirka Xisbiga Kulmiye loo afduubay Sheeko dhaqankeeni Miyiga.
Soomaalidu Geela oo ay Xoolaha nool ugu jecelyihiin wakhtiyadi hore way kala dhici-jireen. Marka Geela lagu soo duulo raggu isku mid ma ahayn, ragga qaar way ku dagaalami jireen kadibna waxba kaga dhimanjiray iyana waxbay colka kala hadhi jireen amma waa lagu soo gaadhi jiray amma waa laga awood roonaan jiray oo kaldanbe ayay aarsan jireen. Ragga qaarna marka lagu soo duulo Geela ayay qaylo dhaan dhawaaqi jireen oo odhan jireen “Waar Geeli la dhacyeey”..
Waxa jira qaar aan labada midna ahayn oo marka Geela la dhacaayo iyagana lagu darsan jiray, waxaanay Ciidanka Geela dhacaya odhan jireen” Kama soo degayno Fardaha ee Geela duub” . Hadda waa Geeliisi la dhacaayay ayuu Ciidankii dhacaayay u duubaya . Ninkaasi siduu Geela u duubaayo Bawdyaha ayuu dhiigu ka daadan jiray, hadhawna marka uu Geela geeyo degaanki lagu waday ee Ciidanka dhacay ugu tallo galeen way iska soo dayn jireen isagoo Jilbaha dhiigu ka da’aayo. Intaasiba Shirkii Xisbiga Kulmiye ayay ka dhex muuqdeen ee sheeg hadaad garato.